Adršpach (German Adersbach) bụ obodo nta nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Bohemia n'okpuru mkpọda nke Adršpach Castle. Ọ dabere na mpaghara Náchod na mpaghara Hradec Králové na mpaghara njegharị Kladské pomezí. Adrspach nwere ndị bi 503 na mpaghara 1971 ha. E kewara ya ụzọ abụọ, Dolní Adršpach na Horní Adršpach.
Adršpach dị n'ogologo mita 554 dị ihe dị ka kilomita 5 n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo Teplice nad Metují na ihe dịka kilomita 23 n'akụkụ ebe ugwu nke obodo Náchod. Ọ dị n'ókè ya na obodo Teplice nad Metují, yana Polish Silesia na obodo nta nke mpaghara Trutnov. Nke kachasị dị n ’ebe a na-egwu mmiri nke Metuje (488 m). Isi ihe kachasị elu bụ Krupná hora (705 m). Akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ nke obodo a dị na oke ọhịa nke Závory, ebe ókèala ya na mpaghara Trutnov gafere, yana n'ihu mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ, nke bụkwa ókèala na Poland ruo na Oke Oke (700m; PLA mpaghara I), ebe mpaghara ugwu Adršpach. Site na ebe a, ókè-ala ahụ na-aga Dlouhý vrch (698 m), nke bụ kuesta, na escarpment nke bụ mpaghara XNUMX nke Broumovsko - bukoklenové lesy PLA. Ókèala ndị ga-aga n'ihu…
Ọdọ Adršpach Lake
Ogige ájá Adršpach dị na Adršpach-Teplice Rocks National Nature Reserve. E mepụtara ọdọ mmiri mara mma nke nwere mmiri doro anya na aja nwere aja site na idei mmiri ebe mmiri na-agbari okwute ma taa bụ otu n'ime ọdọ mmiri kachasị mma na Czech Republic.